38 Iimpazamo zokuThengisa nge-imeyile ukujonga ngaphambi kokuCofa Thumela | Martech Zone
Zininzi iimpazamo zetoni onokuzenza ngayo yonke inkqubo yokuthengisa ye-imeyile… kodwa oku infographic evela kwiimonki ze-imeyile ijolise kwezo mpazamo zinkulu sizenzayo ngaphambi kokucofa ukuthumela. Uya kubona ukukhankanywa okumbalwa kwamaqabane ethu 250ok kuyilo kunye nokusebenza kokuhanjiswa. Masikhe singene:
Phambi kokuba siqale, ngaba simiselwe ukusilela okanye impumelelo? Abaxhasi bethu e 250ok unesisombululo esimangalisayo esinokukunceda ujonge phantse wonke umba ngokubhekisele kubume be-imeyile, ukuhanjiswa, kunye nokubekwa ebhokisini.
IP ezinikezelweyo -Ungavumeli ukunikezelwa kwakho kutshatyalaliswe ngumthumeli ombi kwinethiwekhi efanayo ye-IP yenkonzo yakho ye-imeyile.
Ukufakwa kwebhokisi lemiyalezo engenayo -Sebenzisa isisombululo sokujonga esibhokisi yebhokisi engenayo ukuqinisekisa ukuba ii-imeyile zakho azithunyelwa kwifolda ye-junk, zenza i-inbox.
Ukuhanjiswa -Sukushiya inkonzo elungileyo ye-imeyile ngokungalunganga kwaye utshabalalise ukuhanjiswa kwakho.
Uluhlu olumnyama -Qiniseka ukuba idilesi yakho ye-IP ayikho kuluhlu lwabathumeli, okanye kungenjalo unokufumana ukuhanjiswa okungalunganga okanye ukubekwa ebhokisini.
thambeka -Thumela ukusuka nokugcina i-imeyile elungileyo ukuze uzakhele igama (kunye ne-IP yakho).
SPF -Umgaqo-sikhokelo woMgaqo-nkqubo woMthumeli uyimfuneko ukuze ii-ISPs zinako Ii-ISPs zinokungqinisisa kwaye ziya kufumana ii-imeyile zakho.
I-DKIM - Iposi yeDomainKeys echongiweyo vumela umbutho uthathe uxanduva lomyalezo osendleleni.
I-DMARC - I-DMARC imodeli yokungqinisisa yamva nje yokubonelela nge-ISPs ngezixhobo abazifunayo ukuze i-imeyile yakho igqithe.
Impendulo kwiiLops -Qiniseka ukuba unengxelo ephunyeziweyo ukuze ulwazi oluvela kwi-ISP lubikwe kwi-ESP yakho ukuze kuphuculwe ukuhanjiswa kwe-imeyile.
Ulawulo lwababhalisi yinto ebalulekileyo kwinkqubo yentengiso ye-imeyile esempilweni.
Imvume - sukuzifaka engxakini nge-ISPs. Cela imvume kwi-imeyile.
Ezikhethwayo -Bonelela kwaye usete ulindelo kumaxesha ababhalisile bakho.
Ukungasebenzi -Ususe ababhalisi abangasebenziyo ukunciphisa izikhalazo ezingabhaliswanga kunye nokusilela kothethathethwano.
Ubuninzi -Sukunyusa isantya esiphakamileyo kangangokuba ababhalisi bakho bayemka.
Ukwahlulahlula -Ukujongile ukubalwa kunye nokuchaneka kwisahlulo sakho?
Kulapho imali ikhoyo kodwa iinkampani ezininzi zenza iimpazamo ezithile eziyintlekele.
Imigca yesifundo ekruqulayo -Ukuba ufuna umntu ukuba avule, mnike isizathu! Phuma IsiGaba seNgcaciso yeMigca ye-ActiveCampaign uncedo.
U bungqina - ukhe wafunda isicatshulwa sakho kwimiba yegrama nopelo? Njani ngethoni yelizwi?
Ii-CTA ezomeleleyo -Yenza ukuba iiCalls-to-Action zakho zigqame kwiselfowuni okanye kwidesktop!
FNAME -Ukuba awunawo amagama kubo bonke ababhalisile, sukubajongisa! Okanye sebenzisa ingqiqo.
Hlanganisa imihlaba -Vavanya yonke idatha yakho ngaphambi kokuba uthumele enye imephu kunye nomxholo onamandla oya kukumisa.
mvelaphi -Ivavanya imvelaphi kubathengi be-imeyile… abaninzi abayisebenzisi.
Amaqhosha -Sebenzisa imifanekiso njengamaqhosha ukuze amaqhosha akho ajongeke kubo bonke abathengi be-imeyile.
Lwangaphakathi -Usebenzisa useto olufanelekileyo lwelanga kunye neesimboli zababhalisi bakho?
bokushicilela - sebenzisa iifonti ngokubuyela umva kwezixhobo kunye nabaxhasi abangabaxhasi.
Social - unalo unxibelelwano kwiiakhawunti zakho zemidiya yoluntu ukuze abantu babe nabahlobo kwaye balandele?
Abaxhasi bethu e 250ok unokhetho lokujonga kuqala i-imeyile yakho kuzo zonke iinkonzo eziphambili ze-imeyile.
I-snippet -Vavanya i-imeyile ukuze ubone imigca yakho embalwa kwimboniso ye-imeyile inyanzelisa
Alt - sebenzisa isicatshulwa esinyanzelekileyo ngawo wonke umfanekiso.
uvavanyo -Uvavanyo lwemigca yesifundo, amakhonkco, ii-CTA, ii-personalizaiton, ubunyani kunye nokwahluka.
Ungazikhupheli Iifonti ezincinci kunye nokufihlwa okungafunekiyo kundenza ndiphephe ukwenza ishishini nawe.
IiAkhawunti -Dibanisa iikhonsathi zeeyile ezinde ezinamacandelo ukuze ujonge ukuhambisa kakhulu.
Retina -Sebenzisa imifanekiso yokusombulula okuphezulu elungiselelwe ukuboniswa kweretina ezisetyenziswa zizixhobo ze-Apple zale mihla.
noluphendulayo -Qiniseka ukuba i-imeyile yakho ijongeka intle kwizixhobo zefowuni kunye neethebhulethi. Unokufuna ukongeza izinto zokunxiba, kungekudala!
Thumela i-imeyile ngokujonga
Ubuchwephesha be-imeyile kunye nendlela esebenza ngayo xa ifika kwibhokisi yakho yebhokisi engenayo inokuchaphazela ukuthembeka kwakho kunye nokucofa kunye nokuguqula amaxabiso.
Ukusuka kwidilesi -Sebenzisa eyaziwayo 'Ukusuka kwidilesi'
Phendula kule dilesi -Kutheni usebenzise noreply @ xa kukho amathuba okudibanisa nokuthengisa?
Qhuba ngokusengqiqweni -Qiniseka ukuba amaphulo akho e-drip ayenziwa ngokufanelekileyo.
Links Ngaba uzivavanyile zonke izixhumanisi kwi-imeyile ngaphambi kokuthumela kubo bonke ababhalisile?
Imihla yokuLungisa -Akha iphepha eliguqukayo lokufika kunye neefom zeefom ezimbalwa.
Ukubika -Bamba izibalo, uzihlalutye, kwaye uphucule iinzame zakho zokuthengisa nge-imeyile.
ukuthobela - unalo lonke ulwazi oluyimfuneko lokuthotyelwa komthetho ngokupheleleyo kwiinyawo zakho?
[box type = "download" align = "aligncenter" class = "" width = "90%”] Khuphela iimvavanyo zeeMonks ze-imeyile ngokukhawuleza uluhlu lokuhlola Izinto oza kuzijonga phambi kokuba uthumele. I-PDF encinci! [/ Ibhokisi]
tags: dkimI-DMARCIposi yeDomainKeys echongiweyoiikodoni ze-imeyileimvelaphi ye-imeyileamaqhosha e-imeyileIi-CTA ze-imeyileiifonti ze-imeyileUbume be-imeyileI-imeyile yamanye amazweUkudibanisa i-imeyileimvume ye-imeyilei-retina ye-imeyileImigca yesifundo se-imeyileimitya yokutshintsha i-imeyileUvavanyo lwe-imeyiletypography ye-imeyileimeyile ayikhuphiFNAMEumfanekisoababhalisi abangasebenziyoimvumenoluphendulayoretinaspfIiCTA ezomeleleyoimvume yomrhumoUkukhetha umrhumoimitya yokutshintsha
Mar 10, 2016 ngo-5: 26 AM
Uvumelana ngokupheleleyo nezi mpazamo zentengiso ye-imeyile.
Ndikwavakalelwa kukuba ezi zezona mpazamo zixhaphakileyo ezenziwa ngabathengisi be-imeyile abaninzi. Ukuthumela ii-imeyile ngesifundo esikruqulayo yimpazamo eqhelekileyo kakhulu.
Andizange ndivule nayiphi na i-imeyile engatsali amehlo am. Ndihlala ndingahoyi okanye ndicima ii-imeyile ezinjalo ngoko nangoko.
Abathengisi be-imeyile kufuneka baqonde ukuba akukho mntu ufuna ukuchitha ixesha labo ekufundeni ii-imeyile ezikruqulayo. Ukuba ufuna ngokwenene ukuziguqula kuya kufuneka uthumele ii-imeyile ezinomgca otsala amehlo, onomtsalane kunye nothembisayo. Ngenxa yokuba ngumgca kuphela ofundwa ngabafundi kuqala.
Ngoko ukuyinyamekela kunokuphucula izakhono zakho.
Ndiyavuya kuba udwelise zonke iimpazamo ezinkulu zentengiso ye-imeyile apha ukuze sizifunde kwaye siziphephe. Enkosi ngokwabelana nathi. 😀